प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निस्केपछि सगरमाथामा भारतको दावी, गोप्य साँठगाँठ के थियो ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निस्केपछि सगरमाथामा भारतको दावी, गोप्य साँठगाँठ के थियो ?
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालुवाटारबाट निस्केपछि एक भारतीय पत्रकारले सगरमाथामा भारतको पनि दावी हुने भन्दै एक भारतीय टेलिभिजनमा सनसनीपूर्ण समाचार बनाएका छन् ।
भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधिर चौधरीले सगरमाथामा भारतको पनि दाबी हुनुपर्ने भन्दै सनसनीपूर्ण समाचार बनाएका हुन् ।
उक्त टेलिभिजनको टोलीलाई गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलले बालुवाटारमा न्यानो स्वागत गरेका थिए । सो च्यानलले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तरवार्ता समेत प्रशारण गरेको थियो । तर त्यहि जी न्यूजले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा भारतको पनि दाबी हुनुपर्ने भन्दै सगरमाथालाई भारतीय नाम दिने अभियान थालेपछि प्रधानमन्त्रीको भेटलाई रहस्यपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयललाई नेपाल ल्याउन मध्यस्ता गर्ने टोलीले नै चौधरीलाई नेपाललाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरवार्ता गर्ने चाजोपाजे मिलाएको थियो ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेटेपछि जी न्यूजको टोली सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरमार्फत सगरमाथाको आधार शिविरमै पुगेको थियो । सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा उभिएर, सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधिर चौधरीले भने, ‘आज यो ठाउँबाट तपाईंहरूलाई म केही बताउन चाहन्छु । म भन्न चाहन्छु कि माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतको पनि दाबी हुनुपर्छ ।’
उनले भारतसँग सगरमाथाको साइने भएको पनि दाबी गरे । यसबारे उनले सन् १८५२ को घटनाको जानकारी दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आज म यहाँ उभिएर भन्न चाहन्छु कि भारतसँग माउन्ट एभरेस्टको के साइनो छ रु वर्ष १८५२ मा राधानाथ सिकदरले पहिलोपटक माउन्ट एभरेस्टको उचाइ मापन गरेका थिए । सर्भे अफ इन्डियाले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएको थियो । उनलाई आदेश थियो– तपाईं जानुहोस् र माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापेर आउनुहोस् । ’